Celtra: mandeha ho azy ny fizotry ny famoronana famoronana doka. Martech Zone
Celtra: mandeha ho azy ny fizotry ny famolavolana doka
Sabotsy, Martsa 21, 2020 Zoma, Martsa 20, 2020 Douglas Karr
Araka ny Forrester Consulting, amin'ny anaran'ny Celtra, 70% amin'ireo mpivarotra no mandany fotoana bebe kokoa mamorona atiny fanaovana dokambarotra niomerika noho ny tian'izy ireo. Saingy nanamarika ireo namaly fa ny famokarana automatique dia hisy fiatraikany lehibe mandritra ny dimy taona ho avy amin'ny famolavolana doka famoronana, ary misy akony lehibe amin'ny:
Ny habetsaky ny doka (84%)
Fanatsarana ny fizotrany / fahombiazan'ny workflow (83%)
Fanatsarana ny fifandraisan'ny famoronana (82%)
Fanatsarana ny kalitaon'ny famoronana (79%)
Inona no atao hoe Sehatra fitantanana famoronana?
Sehatra fitantanana famoronana (CMP) no manambatra fitaovana fampirantiana fampirantiana ampiasain'ny matihanina amin'ny marketing sy dokam-barotra ho sehatra iray mifamatotra miaraka amin'ny rahona. Ireo fitaovana ireo dia misy mpanao fananganana doka afaka mamorona famoronana mavitrika amin'ny famoahana betsaka, famoahana fantsona ary fanangonana data sy fanadihadiana.
G2, Sehatra fitantanana famoronana
Celtra dia Sehatra fitantanana famoronana (CMP) amin'ny famoronana, fiaraha-miasa ary fanamafisana ny dokam-barotra nomerika. Ekipa mpamorona, haino aman-jery, marketing, ary masoivoho no manana toerana iray handanjalanjana ny fampielezan-kevitra sy ny famoronana mavitrika manomboka amin'ny kitapo manerantany mankany amin'ny media eo an-toerana. Vokatr'izany, ny marika dia afaka manapaka ny fotoana famokarana ary mampihena be ny lesoka.
Manerana ny solaitrabe dia nahita ekipa marketing sy ekipa mpamorona miady isika amin'ny resaka famolavolana, famokarana ary fandefasana fampielezan-kevitra amin'ny marketing amin'ny ambaratonga. Ireo ekipa mpivarotra sy ny Creative Operations dia mikaroka am-pahavitrihana ireo rindrambaiko hanatsarana ny fahombiazan'ny fizotrany, ny fivezivezena, ny refy ary ny maha-zava-dehibe ny vokatra avoakany.
Mihael Mikek, mpanorina & Lehiben'ny mpanatanteraka ao Celtra
Na dia sahirana aza ny marika hanaraka ny filan'ny mpamorona sy ny dokam-barotra ankehitriny, ny data dia nanambara ihany koa vahaolana maro izay hamenoana ny banga amin'ny fizotrany ankehitriny ary hanompo ireo faritra izay sarona amin'ny fomba efa fanaony. Rehefa mieritreritra ireo fahaiza-manao izay manohana indrindra ny famoronana sy ny fanamafisana ny atiny fanaovana dokambarotra dizitaly, dia naniry ny mpamaly:
Sehatra iraisana hijerena ny famokarana, ny asa ary ny fahombiazana (42%)
Votoatin'ny famoronana izay mifanaraka amin'ny data (35%)
Metrika / fitsapana namboarina (33%)
Tsindrio famoronana tsindry iray monja amin'ireo sehatra sy fantsona (32%)
Fandehanana miasa farany-ho-amin'ny famoronana nomerika multichannel (30%)
Key Celtra dia manasongadina:
Ataovy io - Famoronana famoahana izay noforonina tamin'ny fomba mavitrika sy atosiky ny angona. Ny sehatra dia miorina amin'ny rahona ho an'ny famoronana famoronana fotoana tena izy. Ireo mpamorona doka famoronana mavitrika sy mpamorona horonan-tsary dia manana traikefa eo an-toerana sy mifampiresaka. Ny fananganana modely sy ny fitantanana miaraka amina kalitao azo antoka (QA) dia natsangana.
Tantano izany - Mahazoa fifehezana feno amin'ny famokarana dizitaly sy ny fizotran'ny asa amin'ny alàlan'ny sehatra afovoany mifototra amin'ny rahona. Fitaovana fiaraha-miasa Visual miaraka amin'ny fananganana sy ny topy maso dia ampidirina amin'ny fizotran'ny doka. Ny famindrana tombony amin'ny famoronana dia hita manerana ny vokatra sy ny endrika. Ny fizarana dia misy manerana ny haino aman-jery sy ny sehatra sosialy miaraka amin'ny fitantanana ny alàlan'ny fampielezan-kevitra mihetsiketsika sy ny fampidirana ny sehatra feno amin'ny fantsom-panafody doka.
Refesina io - Manangona angon-drakitra famoronana manerana ny fantsona hitondrana angona fampisehoana amin'ny ekipa mpamorona ary hanome angona famoronana ho an'ny ekipa media. Ny sehatra dia manana metrise fampisehoana sy horonan-tsary mahazatra, mpanangana tatitra ary sary amin'ny alàlan'ny dashboard. Misy ihany koa ny fanondranana na tatitra API ho fampiraisana ny valin'ny fahombiazana.
Tags: famoronana dokafamoronana dokam-barotraCeltraCmpinona ny cmp